शब्दक्षेत्र: my essay
म मान्छे भएर बाँच्ने अभिप्शा कुनै समय पूरा हुनेछ । शायद यही सोच्नु नै समस्याको शुरुवात् रहेछ । समस्या, यो कुनै मेरो प्रिय साथीको नामझैँ बारम्बार मेरो मानस्पटलमा निर्धक्क हिँडडुल गर्ने कुनै विकिरणीय तरङ्गजस्तो एब्स्ट्रयाक्ट आकृति हो । रुसो भन्दै हुन्छ–मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छ र समाजले उसलाई परतन्त्र बनाउँदै लैजान्छ । यो अलिक पुरानो मोडलको विचार(कोटेसन ) हो । अब मान्छे क्रोमोजोमल अवस्थादेखि नै सुरक्षित छैन । ऊ उहीँदेखि परतन्त्र छ । एउटा सत्य कुरा गरूँ म आफू नै पुरुषसूचक क्रोमाजोम थिइन भने शायद् मेरो हालको अस्तित्व सम्भव थिएन । मेरो क्रोमोजोमल अवस्थामा नै घाँटी निमोठिने थियो ।
मसँग विचार छ । मसँग चेतना छ । मुटु छ । मसँग बोल्नका लागि ओठ र जिब्रो छ । अन्य सबै अङ्गप्रत्यङ्ग छन् । मान्छेकै जस्ता सबै भावभङ्गिमाहरू भएरै पनि म मान्छेजस्तो किन छैन ? सपनाहरूले नै ब्रह्माण्ड सिर्जना हुने भए मसँग अनन्त ब्रह्माण्ड सिर्जना गर्नसक्ने अनन्त सपनाहरू छन् । कल्पनाहरूको सहर हुँदो हो त मसँग अनन्त सहरहरू हुने थिए र म अनन्त देशको बासिन्दा हुने थिएँ । आशाहरूले मात्र घर बन्ने भए मेरा असङ्ख्य घरहरू बन्ने थिए र रहरहरूको प्रान्तमा अगणित सङ्ख्यामा मानिसहरू खुसीको होली खेलिरहेका हुने थिए । तर के गर्ने ? मेरा खुट्टाहरू हिउँले खाएका यति (हिममानव) का खुट्टाहरू जस्तो खिइरहेछन् । जुन अङ्ग कम प्रयोग भयो त्यो अङ्ग हराउँदै जान्छ भन्ने लेमार्किज्मको हाइपोथेसिस तर्कसङ्गत मेल भइरहेछ । प्रयोगमा नआएको फलाममा खिया लाग्दै गएझैँ मेरो मष्तिष्क शायद् काम नलाग्ने हुँदै गइरहेछ । मेरो सानो र प्यारो चेतनाको भाँडो मक्किँदै गइरहेछ ,अनि यो शुष्क शरीर झन्झन् कमजोर भइरहेछ ।
आखिर एउटा भ्रम मान्छे हुनुको परिकल्पना बाँचिरहेछु । म मान्छे होइन । यो तर्क पुष्टि गर्न मसँग पर्याप्त आधारहरू छन् । मेरा आँखाहरू देख्नका लागि ,मेरा कानहरू सुन्नका लागि ,मेरो मष्तिष्क सोच्नका लागि ,मेरो मुटु संवेदित हुनका लागि वर्जित छन् । हो यी सब कुराहरू मबाट सम्भव छैनभने म कसरी मानव ? म त पूर्ण रोबर्टमा परिणत छु । हो मैले केही मान्छे हौँ भन्नेहरूकै हालत देखिसकेको छु । उनीहरू आदिमानवहरू झैँ मान्छेलाई नै शत्रु मानेर झगडा गर्छन् र विजयपश्चात् मान्छेकै मासु कुनै पोस्टमोडर्न हस्पिटलको मुदार्घरमा बसेर भव्य समारोहबीच खाने गर्दछन् ।
यहाँ सही देख्ने ,बोल्ने र सुन्नेहरू गलत हुन्छन् ,अनि गलत देख्ने ,बोल्ने र सुन्नेहरू सही हुन्छन् । अझ यसलाई यसो भनौँ न समय उल्टो हिँडिरहेछ । त्यो पनि होइन,त्यसो भन्नलाई समय पुरानो दिशातिर फर्केको पनि छैन । के त उसो भए पृथ्वी घोप्टियो भनूँ ? त्यो पनि होइन होला गोलो पृथ्वी कसरी घोप्टिने ? बरु यो उल्टो भन्ने कुरा नै उल्टो पो भयो कि ? त्यो हुन पनि सम्भव छैन किनकि उल्टो उल्टिएपछि सुल्टो हुनुपर्ने, त्यस्तो पनि भएको छैन । बरु यी सबै कुरा र विषयहरूलाई समेटेर अर्काे निर्णय गरौँ ःयो पृथ्वी नै अनियमित छ । हालका परिस्थितिहरू लाई विहङ्गावलोकन मात्र गर्ने हो भने पनि यो शव्द नरमझैँ अनुभूत हुन्छ । यति सफ्ट शव्द प्रयोग भयो भने शव्दकै मानहानी हुने देखिन्छ । त्यसैले यहाँ पृथ्वीलाई अनियमितताको परकाष्ठा भनिदिँदा सही ठहर्ने देखिन्छ । यहाँ पृथ्वीको आकारको अनियमितताका विषयहरू उठेका हैनन् । पृथ्वीमा भइरहेका मानवाधिकृत क्रियाकलापसँग सम्वद्घ भएर यी विषयप्रसङ्गहरू उठिरहेका छन् । धर्ती आमा हुन् म भन्न सक्दिन । जसले जन्मायो उसले हुर्काउने चेष्टासम्म कम्तिमा गर्नुपर्छ । जन्माएर बेवारिस छोडिदिँदा आमा भइने भए सबै पुरुषहरू आमा नै हुन् ।
रोबोटसँग आत्मा हुँदैन । म पनि रोबोट अर्थात् यो युगको पछिल्लो सभ्यताको मान्छे । मसँग पनि आत्मा छैन । आत्मा भएका केही मान्छेकै प्रजातिहरू हातमा आत्मा बोकेर मन्दिरअघि माग्न बसेको देखेपछि मैले मेरो आत्माको मेडिकल चेक गरेको थिएँ र मेडिकल रिपोर्टले मेरो आत्मा नभएको सहर्ष पुष्टि ग¥यो र त्यहाँबाट के पनि पुष्टि भएको पाएँ भने पछिल्ला चरणका अत्याधुनिक मानिसहरूमा अक्सर गरेर आत्मा नहुँदोरहेछ । यी नयाँ खालका जीवहरूलाई अब मान्छे भन्न नहुने र यिनीहरूको छुट्टै नाम दिनुपर्नेमा मेडिकल विभागको मान्छेको नयाँ अवतारसँगै नयाँ माग थपिएको रहेछ । यो मागअनुसार मान्छे रोबर्टजत्तिकै हैसियतको हुन पुग्ने देखिन्छ । मेडिकल विभागले यो विषयको छानविनका लागि मानव विकास तथा संशोधन शाखा ,पृथ्वी र उडनस्तरी केन्द्रिय विभाग ,अन्तरीक्षमा पठाउने निर्णय गरेको अन्तत ः पुष्टि हुन आएको छ । हो यस्तो समाचार अब हामीले पढ्यौँ भने कुनै अचम्म हुने छैन ।
म ठूलो भएपछि कुनै दिन हावाको गतिमा दौडिन सक्नेछु । हावाको वेगवान प्रवाह देख्दा सानोमा कुनै दिन मैले सोचेथेँ । म ठूलो भएपछि कुनै दिन चराको गतिमा उड्न सक्नेछु । चराहरूले आकाशमा कावा खाँदै उडेको देख्दा कल्पना गरेथेँ । हो आज म हावाको गतिसँग डराउन थालेको छु । पखेटा काटेर पिँजडामा राखिएको चराझैँ भएको छु । अनुभवशून्य ,भयभीत र शुष्कप्राय ः ।
म किन नियन्त्रित छु ? मेरो यो खुल्ला प्रश्न हो । जो कसैका निम्ति सम्प्रेषित । तिमीलाई ,तपाईँलाई ,यहाँलाई ,हजुरलाई वा जो कसैलाई वा हुनसक्छ म आफूलाई नै । हो यसको सही उत्तर पाउनुको लालसा नै मेरो अन्तिम आशा हो । जिन्दगीको कुनै कुनामा यो प्रश्नको जवाफ फेला प¥योभने यो जिन्दगीसँग मैले अनुग्रहीत हुने कुनै आशाको त्यान्द्रो फेला पर्नेछ शायद् ।
एउटा बुख्याँचा शायद् मान्छे हुनुको भ्रम बाँच्छ । भ्रम बाँड्छ पनि । बारीमा अन्न चोर्न आएका स्यालहरू समेत यस्ता बुख्याँचाहरू सँग डराउँदा रहेछन् । सुगा, परेवा र ढुकुरहरूको कुरा छाडूँ , तिनीहरू त नडराउने कुरै भएन । बुख्याँचाहरू पनि आदिम रोबर्टहरू हुन् । यसो भनूँ यिनीहरू रोबर्ट प्राक्कल्पनाका आधारहरू हुन् । यी आधारहरू खडा गर्ने पनि मान्छेहरू नै हुन् । मान्छेहरूले नै यी बुख्याँचाहरू किन बनाए ? र आफूजस्तो नै किन बनाए ? बाघ ,भालु ,चितुवा, सिंह वा अन्य डरलाग्दा जीवहरू अरू थिएनन् र ? यसको मतलब सबभन्दा भयानक र डरलाग्दा भनेका मान्छेहरू नै रहेछन् र ऊ सबैलाई आफूसँग डराउन् सोच्छ । सबैमाथि आफ्नो नियन्त्रण चाहन्छ । यो कुन सुपरनेचुरल पावरले उसलाई उत्प्रेरित गरिरह्यो ? मान्छे किन प्रेमिल सभ्यता रुचाउँदैन ? ऊ किन गाइरहन चाहँदैन प्रेमको मधुर धुन ? कुनै सन्नाटामा हुच्चिलहरू कराएझैँ ऊ किन निकालिरहन्छ कर्कश ध्वनी ? एकोहोरो ।
मलाई कृतिम मान्छे भएर बाँच्नुको रहर हराइसकेको छ । आडम्बरहरूको थुप्रो लगाएर त्यसकै सम्मोहनमा खिचिइरहनुले मलाई पुगिसकेको छ । मलाई अनेक आवरणीय परिचयहरू देखाएर आफ्नो यथार्थ भुल्नु छैन । आफ्नो पभिाषा मेटाउनु छैन । मलाई बन्नु छैन कुनै कथित बुद्ध अनि क्राइष्ट । मेरो यो रोबर्ट अस्तित्व (सकेँ भने ) मेटाउनु छ । मेरो यो बुख्याँचा जीवनशैली (सकेँ भने ) पन्छा लगाउनु छ । मलाई मेरो स्वतन्त्रतामा दौडिनु छ हावाको गतिजस्तै । मलाई मेरो आफ्नै गतिमा बग्नु छ ( धिमा नै किन नहोस )नदीको प्रवाहजस्तै । बग्नु छैन खहरेजस्तो क्षणभर उर्लिएर । म ठीक हुनु छ मसँगै । मैले लगाउनु छैन कुनै रङहरूको चस्मा र रङ्गिनु छैन आफू पनि कुनै रङहरूले । पानीको कुनै रङ हुँदैन । मलाई पनि बन्नु छ सङ्लो पानीजस्तै । बादलहरूको कुनै आकार हुँदैन म पनि बन्न चाहन्छु बादलजस्तै कुनै ठोस आकारहीन । जूनको जुन शीतलता छ ,हो त्यही शीतलता चाहन्छु जीवनभर आश्वादन गरिरहन । मलाई जम्नु छैन बरफजस्तो तर स्विकार्नु छ बरफको पग्लाइ । मलाई उठ्नु र उड्नु छैन वाफजस्तो तर अनुभव गर्नु छ वाफको क्षमता ।
हो मलाई हुनु छ मान्छेजस्तो । सजीव । कुनै परिभाषाविहीन (वा सबै परिभाषायुक्त ) मान्छेको (मात्र मान्छेको ) आकार चाहन्छु मभित्र । शायद् पाउँछु या पाउँदिन । जय मान्छे ।
Posted by subas at 4:32 AM
रमेश मोहन अधिकारी April 12, 2010 at 8:34 AM
ब्लग बनाएकोमा शुभकामना ! लेख स्तरीयछ,भाषिक र प्रस्तुति दुवै दृष्टिले अझ परिष्कृत होओस् ।
subas April 13, 2010 at 6:53 PM
subas November 24, 2010 at 9:29 AM
yo madhuparka 2067 mangsirma prakashana bhayo.
yug pathakko upanyas urgenko ghodamathi tippani.
poet khanalka sirjana: Rainy days(Prakash Sayami )...